भारतीय गाडी रोक्नु सिन्डिकेट होइन, सुधार होः अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल - Nepali Sandes
भारतीय गाडी रोक्नु सिन्डिकेट होइन, सुधार होः अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल
करिब २ वर्षअघि मुस्ताङमा बाहिरी सवारी साधन लैजान नपाइने र त्यहींका स्थानीय बस प्रयोग गर्नुपर्ने यातायात सिन्डिकेट थियो । मुस्ताङमा सिन्डिकेट हुँदा पोखराबाट जाने पर्यटक समस्यामा परेको भन्दै पोखरेली पर्यटन यातायात व्यवसायी समितिले विरोध गरेका थिए ।
पछि सिन्डिकेट हट्यो र सबै प्रकारका बस मुस्ताङ निर्बाध आउजाउ गर्न पाए । मुस्ताङ जाने बसमाथि एकाधिकार जमाएको आरोप लगाएको पोखरेली पर्यटन व्यवसायी अहिले सोही किसिमको निर्णय गरेको छ । ‘भारतीय सार्वजनिक बसबाट साइट सिन हेर्न पाइँदैन । स्थानीय यातायातका साधन प्रयोग गर्नुहोस् ।’ यसको अगुवाई गरेको छ, पोखरा पर्यटन परिषद्ले ।
भ्रमण वर्ष २०२० को मुखमा आएर भारतीय सार्वजनिक बसमाथि रोक लगाउँदा पर्यटकको आगमनमा कस्तो असर पर्ला ? के यो निर्णय लिनु उचित थियो ? पोखरा पर्यटन संघसंस्थाका छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद् अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलसँग समाधानले गरेको कुराकानी ।
नेपालमा आउने ४० प्रतिशत पर्यटक भारतीय हुन्छन् भनेर तपाईंहरु नै भन्नुहुन्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा हुन अब केही दिनमात्रै बाँकी छ । यही बेला परिषद्ले किन यो निर्णय लिनुपर्‍यो ?
हामीले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि बाहिर गलत सन्देश गयो । यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन जरुरी छ । हामी राम्रा कुरा टिपेर राम्रो माला बनाउन जानेनौं । सधैं नराम्रै मालामा अल्झिरह्यौं ।
अब भारतीयमात्रै नभनौं । ठूला सार्वजनिक सवारी साधन भनेका हौं । तिनै ठूला सवारी साधनका भरमा पोखरामा साइट सिन गर्न खोजियो । तिनीहरुले विन्ध्यवासिनी मन्दिर र गुप्तेश्वर गुफाबाहेक केही पनि देखाउने भएनन् । यसले पोखराका वरिपरि भएका अन्य पर्यटकीय गन्तव्य ओझेलमा परे ।
पोखरामा नयाँ नयाँ पर्यटकीय ठाउँ विकास हुँदै छन्, त्यसबारे जानकारी दिनु पनि पर्यटन परिषद्को काम हो । पोखरा आएर २ ठाउँमात्रै घुमेर फर्किंदा वास्तविक पोखराको अनुहार देखिँदैन । पोखरा हिमाल र तालमात्रै हेर्न आउने त होइन, अरु पनि छन् ।
अर्को कुरा भनेको पर्यटकको बसाइँ दर हो । उनीहरुलाई जति धेरै पोखरामा बसाल्न सकियो त्यतिधेरै प्रतिफल लिन सकिने हो । एकराते पर्यटक आएर पोखरालाई कुनै फाइदा हुनेवाला छैन । पोखरालाई नजिकबाट चिन्न त धेरै बस्नु पर्‍यो । त्यसका लागि मुख्य समस्याका रुपमा ठूला सवारी साधन भइदिए । ठूलो बस छोड्दै नछाडेपछि कसरी हुन्छ ।
ठूला बसले पार्किङदेखि दुर्घटनासम्मको समस्या निम्त्यायो । उनीहरुले ठूला बस छोडेर यहाँका साना गाडी प्रयोग गरेमात्रै लेन्थअफ स्टे बढ्ने हो । पोखरा १ रातमै सकिने ठाउँ होइन नि !
बाह्य सवारी साधन रोकेर संस्थालाई के फाइदा हुन्छ त ? ठूला बसबाट ओर्लिएरमात्रै बसाइँदर बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन होला नि !
यसमा संस्थाको कुनै इन्ट्रेस्ट जोडिएको छैन । फाइदा भनेको पर्यटन व्यवसायीलाई नै हो । लेन्थअफ स्टे जरुर बढ्छ । जब उनीहरुले पोखरालाई नजिकबाट चिन्न थाल्छन्, त्यसपछि बढ्छ ।
लेन्थ अफ स्टे बढ्यो भने होटेलको व्यापार बढ्छ, रेस्टुरेन्टको व्यापार बढ्छ, यहाँको भेइकलले काम पाउँछन्, कपडा पसलदेखि किराना पसलसम्मको व्यापार बढ्छ । यसले छुने पाटो धेरै छन् ।
त्यही गाडीमा आयो, त्यही गाडी फर्किने भयो भने त पर्यटक आएको के काम लाग्यो ? पर्यटन खाली देख्नका लागिमात्रै होइन नि ? त्यो त पैसा आउने ठाउँ पनि हो । हाम्रो धारणा भनेकै त्यही हो । अब यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ !
केही समयअघि मुस्ताङमा पनि बाहिरी गाडीमाथि रोक लगाइएको थियो । त्यतिबेला सिन्डिकेट भयो भनेर पोखरेली पर्यटन यातायात व्यवसायी नै बढी विरोधमा उत्रेका पनि थिए । त्यो घटना र यो प्रसंगबीच केही ‘कनेक्सन’ पो छ कि ?
प्रष्ट छ त्यो र योमा कुनै कनेक्सन छैन । हामीले कुनै सिन्डिकेट लागु गर्न खोजेका होइनौं ।
भारतीय पर्यटकहरु हाम्रो पर्यटनका मुल आधार हुन् । नेपालमा आएका ११ लाख पर्यटकमध्ये २ लाख त भारतकामात्रै छन् । त्यति मेजर भ्यालु बोकेको पर्यटन बजारलाई माइनस गर्ने पक्षमा छैनौं ।
यो एउटा व्यवस्थापनमात्रै हो । सिन्डिकेट होइन । यसबाट उनीहरुलाई नै फाइदा छ । पोखरालाई राम्रोसँग चिन्ने मौका पाएका छन् । यो कुनै ठूलो विषय नै होइन । कसैलाई बाजा बजाउनुपर्ने विषय होइन ।
पोखरामा भारतीय गाडी रोक हुनुमा पर्यटन यातायात समितिको केही भूमिका छ र यसमा ?
पर्यटन यातायात व्यवसायी समितिको भूमिका छ । यहाँको ट्याक्सी, नगरबसको जस्तो भूमिका छ उनीहरुको पनि त्यस्तै भूमिका छ ।
उनीहरु हरियो नम्बर प्लेटमा गुड्छन् । ठूला गाडीहरु नाट्टा अन्तर्गत चल्छन् । साना गाडी नेपाल टुरिस्ट भेइकल एसोसिएसन अन्तर्गत चल्छन् । साइट सिनमा ठूला बस प्रयोग हुन थालेपछि हरियो नम्बर प्लेटका साना गाडी कामविहीन हुन्छन् । यसले त उनीहरुलाई फाइदा पुग्दैन ।
जब विदेशी ठूला गाडी नचलेर साना गाडी लिनुपर्ने हुन्छ । तब उनीहरु काम आउँछन्, यही हो भूमिका । योभन्दा अर्को इन्ट्रेस्ट छैन ।
रोक नै लगाउनुपर्ने जरुरी थियो र ? अरु किसिमले पनि त व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो नि ?
अहिलेलाई भारतीयमात्रै नभनौं । स्वदेशी या विदेशी ठूला भेइकलले साइट सिन गराउँदा पोखरा छुट्यो । हामीले यहाँ आउन रोक लगाएको होइन, ठूला बस नल्याउन आग्रह गरेका हौं ।
यहाँ कि भारतको भन्नुहोस् कि चिनको या थर्ड कन्ट्रीको भन्नुहोस् । कुनै पनि पर्यटकलाई निरुत्साहित गराउने पक्षमा छैनौं । उनीहरुलाई व्यवधान खडा गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । मात्रै त्यहाँबाट आएका पर्यटकलाई पोखरा राम्रोसँग चिनाउन भनेका हौं ।
ठूला बस नल्याऊ भनेको होइन, हाम्रा बाटा साँघुरा र साना छन् त्यसलाई कुनै ठाउँमा व्यवस्थापन गर र पोखरा मजाले घुम भनेको हो ।
भारतीय गाडी भनेरै किन तोकियो त उसो भए ? पोखरामा त अरु देशका गाडी पनि देखिन्छन् ।
सुरुमा हामीले भारतीय गाडीमात्रै भन्यौं । तर, अब सबै विदेशी गाडी भनेर अर्को विज्ञप्ति निकाल्दै छौं । एउटामात्रै मुलुकको नाम तोक्दा केही गलत सन्देश गएको पक्का हो । अब गल्ती सुधार गर्दैछौं ।source: samadhan news
२०७६ पुष १५, मंगलवार ०६:२० गते मा प्रकाशित, 65 जनाले हेर्नुभयो
पोखराका पर्यटकीय गन्तव्यमा भारतीय पर्यटक गाडीहरुलाई आवत-जावत गर्न रोक लगाइएको छ
आजदेखि पोखरामा ‘स्ट्रिट फेस्टिबलमा’, बढी मूल्य लिएर पर्यटक ठगेमा कारबाही।
तनहुँमा दुई बस ठोक्किदा ४३ घाइते, चालकसहित ५ जनाको अवस्था गम्भीर भएको छ।
तनहुँको व्यास १२ कमलबारीमा दुई बस ठोक्किदा दुर्घटना भएको छ । दमौलिबाट मुग्लिङ्ग तर्फ जादै गरेको ना ७ ख २०६ नम्बरको बस र डुम्रेबाट
आगोलागीले ६६ बर्षिय बृद्ध पदम गुरुङको खुशी लुटियो
यी हुन् कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप आविष्कार गर्न एक महिला वैज्ञानिक रातदिन जुटेकी डाक्टर [ सम्मानको लागी शेयर गरौँ ]
एक महिनादेखि विश्वविद्यालय ठप्प भएकाे छ।
सुनको मूल्य घट्यो कति घट्यो।
‘Australia Kanda’ मा नेपालमा उजुरी, प्रहरीले सुरु गर्‍यो अनुसन्धान
मात्तिइन् अन्जली / घमन्ड मोडल तथा नृत्यांगना अन्जली अधिकारीमा पनि देखा पर्न थालेको बताइन्छ ।
Copyright © 2020 Nepali Sandes All Right Reserved . Designed And Developed by Nepali Sandes